Ịbawanye arụmọrụ nke teknụzụ maka mmepụta nke obere nduku tubers - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
Isi Mgbari Sayensị Ozuzo na nkpuru nkpuru
в Na-elekwasị anya, Ndụmọdụ ọkachamara, Ozuzo na nkpuru nkpuru
Sergey Banadysev, Dọkịta nke Sayensị Agricultural, Doka Gene Technologies LLC
Potato minitubers (MK) bụ ụmụ mbụ tuberous nke osisi nduku na-adịghị ọcha. Inweta obere tubers bụ afọ mbụ nke atụmatụ mkpụrụ nduku na mba niile nwere mmepụta nduku mepere emepe. Nduku Obere-tubers na-okokpon naanị na-echebe ala ọnọdụ, nke ewepu ihe ize ndụ nke re-efe efe nke osisi na viral, fungal na nje ọrịa (ma ọ bụrụ na tubers si akpali mmasị osisi na-okokpon na-emeghe n'ala, mgbe ahụ ọ bụghị Obere-tubers na-enwetara dị ka a. N'ihi, ma mbụ ubi ọgbọ).
A na-anabatakarị na dayameta nke obere tuber kwesịrị ịdịkarịa ala 10 mm, ihe ọ bụla na-erughị ya bụ obere tuber.
Mkpa Obere-tubers maka mmepụta nke 10 puku tọn ton nke J.Randall bụ: na afọ ise atụmatụ nke OS na ES (mbụ na elite mkpụrụ mmepụta) - 50 puku iberibe; na atụmatụ afọ anọ nke OS na ES - 400 puku iberibe; na atụmatụ afọ atọ - 3 nde iberibe.
Russian Federation nwere ntọala siri ike nke sayensị na ihe ọhụrụ na mpaghara a. The nnukwu ọnụ ọgụgụ iwebata nke kasị oge a teknụzụ maka na-eto eto Obere-tubers na Russian Federation mgbe e rụrụ n'ihu mba ndị ọzọ na-mepụtara nduku na-eto eto: ya mere substrate technology e ẹkenam 40 afọ gara aga, 15 biotechnological emmepe na-arụ ọrụ na ya; hydroponic - afọ 30 gara aga, Doka na-eji ya - Gene Teknụzụ, Omenala Meristematic; aeroponic - mepụtara na All-Russian Research Institute of Agricultural Biotechnology (All-Russian Research Institute of Agricultural Biotechnology) na mmalite 2000s, ebe 2010 a na nkà na ụzụ na-akwalite site International nduku Center na-arụsi ọrụ ike gbasaa gburugburu ụwa. Na Russian Federation, a na-emepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka obere tubers: Osisi nduku na Meristem. N'otu oge ahụ, ọtụtụ ụlọ na-eto eto mkpụrụ ụlọ ọrụ ka na-emepụta Obere-tubers na obere mpịakọta, n'ime oke nke mkpa maka afọ ise atụmatụ maka inweta elite. Naanị ụlọ ọrụ FAT-Agro eruola ọkwa nke ihe karịrị nde 2 kwa afọ, nke zuru ezu iji gbanwee na atụmatụ afọ atọ.
Mmụba niile na mmepụta nke obere tubers iji belata atụmatụ mmepụta mkpụrụ na imeziwanye ogo ngwaahịa bụ ụzọ dị mkpa iji mepụta mkpụrụ osisi nduku. N'iburu echiche a n'uche, a na-eme ọtụtụ mgbalị n'afọ ndị na-adịbeghị anya iji meziwanye usoro ihe ọkụkụ. Ebumnuche bụ isi nke ihe ọhụrụ bụ inweta ọtụtụ obere tubers dị ka o kwere mee kwa osisi in vitro na mpaghara mpaghara nke griin haus. Iji nweta ya, a na-eji ọtụtụ ụzọ mmepụta ihe ọkụkụ eme ihe, ma ọ bụghị ihe ngwọta niile a tụrụ aro dabere na nsonaazụ nyocha sayensị na-enye nsonaazụ na mmepụta mmepụta ihe.
Ọtụtụ akụkụ nke ịrụ ọrụ nke ọma na-emepụta minituber dị elu bụ ihe ọmụma. The Russian mmepụta nke Obere nduku tubers ka a na-eme mgbe niile na ndị kasị oru oma na elu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ndabere. Ma ugbu a obodo ahụ nwere teknụzụ dị na etinyere ya nke ukwuu karịa ọkwa ụwa.
Isi ọnọdụ maka mmepụta nke obere-tubers bụ irube isi na iwu na ụkpụrụ dị ugbu a. Usoro nhazi nke Russian Federation na isiokwu a bụ ndụmọdụ na okike, na usoro nke ugbu a na asambodo nke ihe ubi ugbo, dịka ọmụmaatụ, ọ dịghị okwu gbasara iwu maka mmepụta na asambodo nke obere nduku tubers. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọ dị mkpa ilekwasị anya na ahụmahụ mba ụwa. Na mba niile mepere emepe mkpụrụ nduku, iwu chọrọ maka nzukọ, teknụzụ na ogo nke obere tubers emepụtara, akwadoro nke ọma ma hụkwa nke ọma.
Ndị a chọrọ kwesịrị ka a ndabere site n'ụlọ ụlọ ọrụ pụrụ iche na mmepụta nke Obere-tubers, na format nke Enterprise ụkpụrụ, maka njide onwe, ruo mgbe ala kpụrụ ihe ukara regulatory kpuchie na mpaghara a. Dịka ọmụmaatụ, na Russian Federation, e nwere ụkpụrụ maka imepụta nkà na ụzụ nke ogige ozuzu na mmepụta greenhouses NTP-APK 1.10.09.001-02. Agbanyeghị, ndị mmepe nke NTP etinyeghị n'ime akwụkwọ ahụ akụkụ nke njirimara amanyere iwu nke ihe owuwu ezubere maka itolite obere tubers. Na e nwere ọtụtụ atụmatụ ndị dị otú ahụ, dịka ọmụmaatụ: griin haus kwesịrị inwe ọnụ ụzọ abụọ na ime ụlọ ejiji maka ịgbanwe uwe. Ebe a na-agbanwe agbanwe kwesịrị ịbụ nke nwere ihe mgbochi ụkwụ na ncha maka ịsacha na ịgbasa aka. A ga-eji ntupu nchebe aphid kpuchie ọnụ ụzọ mbata na oghere ikuku niile (nha nha kacha 0,5 site na 0,9 mm). A ghaghị ịchịkwa ọnụ ụlọ ahụ nke ọma maka okpomọkụ na iru mmiri (dị maka ụlọ iko). Ekwesịrị iji usoro na-enweghị ala maka mmegharị nke osisi na-adịghị mma. Ọ bụrụ na a na-eji ngwakọta ala / ala mee ihe, a ghaghị ịgwọ ya / igba ogwu nke ọma iji hụ na enweghị ihe ndị na-akpata ala.
A ga-enwetarịrị ihe ubi minituber site na microplants gbaara agbaziri agbaziri ma ọ bụ microtubers toro na mpaghara aseptic site na anụ ahụ meristematic nke isi iyi, nwalere maka enweghị nje, viroid na nje bacteria na-efe efe poteto n'ime ụlọ nyocha nyocha nke ọma.
Ụzọ, usoro, ugboro ole na-anwale àgwà nke ihe na niile nkebi nke mmepụta nke Obere-tubers na-ekpa n'ókè.
Achikọbawo ọtụtụ ozi dị mkpa na njikarịcha nke ụkpụrụ micropropagation nduku. Nnyocha na mpaghara a na-egosi ohere zuru oke iji melite uto na mmepe nke osisi dabere na mgbanwe na ntinye uche na oke nke nri. E guzobewo na iji ndị na-emepụta ihe na-eto eto na omenala nke meristems nduku adịghị mkpa, ma mgbakwunye nke ihe ụfọdụ, ọbụna na obere mkpokọta, na-abawanye ma na-eme ka mmepụta nke ihe ahụ dịkwuo elu. Ọ dị mkpa ịkwalite ọnọdụ nnabata nke osisi nduku micropropagated site na iji isi ọkụ dị iche iche, ụdị ọkụ na ikuku ikuku. Site na ọbịbịa nke oriọna LED, a malitere ịmụsi ike ha ike n'ihe gbasara micropropagation nduku. Uhie na-acha uhie uhie na anya na-acha uhie uhie na-abawanye njirimara uto; Otú ọ dị, nchikota nke red + acha anụnụ anụnụ + anya red / ọcha ìhè nwere mmetụta ka mma na tuber guzobe na mkpokọta nke isi metabolites.
Teknụzụ maka na-eto eto Obere-tubers na-ekewa abụọ isi otu: mkpụrụ (akwa iche iche) na-abụghị mkpụrụ (mmiri omenala na aeroponics). Teknụzụ ndị bụ isi maka mmepụta nke obere tubers: na ihe ndị sitere n'okike (80% nke olu), hydroponic na aeroponic. Inweta microtubers na-emetụtakwa isiokwu nke MC ma na-ejiwanye ya maka mmeputakwa nke isi iyi. Ọdịiche dị n'etiti microtubers na minitubers dị na ọnọdụ nke ọkara (microtubers na-etolite naanị n'okpuru ọnọdụ vitro na minitubers naanị n'okpuru ọnọdụ ex vitro echekwara) na tuber size. Nsonaazụ na nkwubi nke enwetara na nnwale bara uru n'ọtụtụ ọnọdụ adịghị ekwekọ na postulates theoretical banyere ohere nke na-akpali tuberization na in vitro omenala. Nke a na-emetụta ma nri nri, iji ndị na-ahụ maka uto na-eto eto, yana ọnọdụ na-eto eto na iji ihe ndị na-akpata nchekasị. Ọ bụrụ n'ihu ọha dị ozi na nkà na ụzụ ụkpụrụ maka mmepụta nke microtubers na-enye ohere, n'ọtụtụ ọnọdụ, na-enweta kama mediocre results - banyere ma ọ bụ ubé karịa otu microtuber erikpu 200-400 mg kwa osisi, mgbe ahụ ọkachamara ukpụhọde nke technology n'ihe metụtara kpọmkwem. ọnọdụ mmepụta na-abawanye arụmọrụ nke usoro ahụ mgbe ụfọdụ. Na Russian Federation, a maara na mpaghara a na-emepụta ma ọ dịkarịa ala atọ microtubers na-atụ ihe karịrị 0,5 g site na otu osisi na tube ule ọkọlọtọ.
Maka ịkọ mkpụrụ nke microtubers kwa afọ na mmụba nke ogo ha, a na-emepụta ọtụtụ ụdị dị iche iche nke bioreactors n'ahịa n'ụwa. Usoro ndị a ọkara akpaaka na-enye gị ohere ibelata nhazi akwụkwọ ntuziaka kpụ ọkụ n'ọnụ na ya mere na-abawanye mmepụta ma belata ụgwọ ọrụ. Microtubers enwetara na bioreactors nwere oke buru ibu na dayameta buru ibu. Teknụzụ kachasị ọhụrụ na mpaghara a bụ mmepe nke ndị sayensị Japan na ndị na-emepụta ihe.
Usoro mmepụta microtuber buru ibu na-eji akpa omenala rọba na-emepụta nke ọma n'etiti 100 na 300 microtubers kwa akpa, dabere na ụdị dị iche iche. Ịgbanwe ntinye nke ihe oriri na-edozi ahụ n'ihe gbasara ọdịnaya dị ala nke sucrose, nitrogen, na-abawanye ọkwa nke potassium phosphate na ọkara mere ka o kwe omume ịbawanye ọnụ ọgụgụ zuru ezu na nkezi arọ nke microtubers. Nkà na ụzụ Japanese na-enye ohere ịmepụta 250 microtubers kwa afọ (na oge owuwe ihe ubi atọ) n'ime ụlọ 000 m.2. na 80% nke microtubers nwetara site na teknụzụ a nwere oke karịa 1 g, i.e. adabara akuku ozugbo n'ọhịa.
N'ụwa niile, mmepụta nke obere tubers na ihe ndị sitere n'okike na-emeri. Teknụzụ a, n'agbanyeghị na etinyere ya nke ọma, ka nwere ike imeziwanye ya nke ọma. Genotype, ogologo oge na ọnọdụ nke ịkụ in vitro, nha osisi, ikpughe nri na ndị na-ahụ maka uto na-emetụta mmepụta nke minituber nke ọma. Afọ na tupu ọgwụgwọ nke seedlings n'oge akuku, ọnọdụ na oge hardening, oge nke akuku na-eto eto, mejupụtara nke ala gburugburu ebe obibi, usoro nke akuku, njupụta nke osisi ọnyịnye, fatịlaịza doses, na ọkụ na-emetụtakwa. ike nke obere tuber mmepụta.
Ọtụtụ ihe ndị sitere n'okike na ihe ndị kwesịrị ekwesị dị ka ihe na-eme ka ọ na-eto eto obere nduku tubers. Isi ihe na-emepụta griin haus bụ omenala peat. Ngwa ndị ọzọ - dị ka perlite, vermiculite na vermicompost - enwetakwara ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya n'ihi ikuku ikuku na-anabata na ike ijide mmiri.
N'ọtụtụ ọnọdụ, mgbe ị na-eto obere tubers na omenala mkpụrụ, ọ dị mkpa itinye macro- na microfertilizers. N'ime ndị ọkachamara, nkà na ụzụ na-eji mmiri na-agba mmiri n'oge na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-edozi ahụ bụ hydroponics. Teknụzụ Hydroponic maka obere tubers nduku na-eto eto nwere ụdị dị iche iche na-eji mkpụrụ osisi inert (aja, ogbugbo osisi, aki oyibo, wdg) na ọdịbendị mmiri dị ọcha (ihe nkiri na-edozi ahụ dị mkpa).
All ndokwa nke tiori nduku oriri na-edozi n'ihe metụtara ohere nke ịchịkwa tuberization nwekwara ike tinye n'ọrụ na hydroponic cultivation, ma e nwere nghọta nke mkpa mgbanwe dị ịrịba ama na ịta na ruru nke nri maka onye ọ bụla dị iche iche na dị iche iche nkebi. nke vegetative ibu, mmalite nke tuberization na uto nke osisi tubers. A na-enye nhazi ihe ngwọta na-edozi ahụ n'ọtụtụ akwụkwọ. N'otu oge ahụ, ọnụ ọgụgụ nke tubers nwetara site na osisi na site na mpaghara unit dị iche iche ọtụtụ ugboro. Dị ka ezubere iche maka mgbanwe na edozi ngwọta radically dịkwuo ọnụ ọgụgụ nke tubers (na nke a bụ kpọmkwem uru nke hydroponics) e nwere nnọọ obere oghe ozi. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ naanị akwụkwọ ole na ole ka ebipụtara ọ bụghị na-ezo aka na ihe ndị a ma ama nke afọ gara aga, kama na ihe ndị mbụ.
Teknụzụ ọgbara ọhụrụ - aeroponic - teknụzụ maka obere tubers na-eto eto nwere ọtụtụ atụmatụ dị mkpa. Ka ọ dị ugbu a, a rụpụtala usoro niile na-esote nke mmejuputa ya, mana nyocha nyocha na-aga n'ihu. Uru pụrụ iche nke ozi nkà na ụzụ na aeroponics bụ na ọ na-egosi ntụziaka nke mmepe nke obere tubers gburugburu ụwa taa. Mmepe ndị a na-adabara ma ọ bụ enwere ike ịmegharị na teknụzụ ndị ọzọ maka obere tubers na-eto eto.
Nhọrọ nke nkà na ụzụ maka mmepụta nke obere tubers maka ọnọdụ ụfọdụ kwesịrị ịdabere na nyocha nke ihe ngosi mmepụta ihe, ọkwa nke ihe ize ndụ, mkpa maka akụrụngwa ọrụ, ntụnyere ego ntinye ego, ọnụ ahịa na uru. Teknụzụ ọ bụla nwere nhọrọ mmejuputa na mgbanwe dị ukwuu na nrụpụta nrụpụta dabere n'ọtụtụ ihe. Teknụzụ niile na-eji ma dabere na ihe ọkụkụ mbụ sitere na ọdịbendị na-adịghị mma ma ọ bụ microtubers. Ogbo a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa niile, enwere ike ịtụle ya dịka ọkọlọtọ. Na teknụzụ nke obere tubers na-eto eto, ị ga-ahọrọ site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mgbanwe.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nnukwu ụlọ ọrụ mkpụrụ ugbu a na-eto Obere-tubers na iko ma ọ bụ ihe nkiri ala greenhouses na eke organo-mineral substrates na ọtụtụ ojiji nke peat. Nkà na ụzụ a nwere ọnụ ala dị ala nke obere tuber. Dị ka a na-achị, a na-akụ otu ihe ọkụkụ kwa afọ. Na Europe, a na-ewere ya dị ka ihe dị mma ịnweta tubers 4-5 site na otu osisi. Ngwa dị iche iche nke microfertilizers, ihe ndị na-arụ ọrụ ndụ, PPP na-enye ohere ịbawanye ihe mmụba ruo 8-10.
Arụmụka na-akwado bioreactor bụ ịmụ nwa, mkpụrụ kachasị nke micro-tubers kwa mpaghara otu. Ọdịmma nke bioreactor bụ mkpa maka ọtụtụ osisi, obere tubers, nsogbu nke ripening na mechanized akuku n'ọhịa.
Uru nke hydroponics bụ nrụpụta, ezigbo ohere nke na-akpali tuberization, akụrụngwa mmepụta ihe; ọghọm - mmepe na-adịghị mma nke usoro mgbọrọgwụ, ihe ize ndụ nke ibute ọrịa na-agbasa site na ngwọta nri, ịrụsi ọrụ ike. Aeroponics chọrọ ohere karịa na ndò zuru oke maka usoro mgbọrọgwụ, n'ihi mmepe ka mma na ikuku ikuku, enwere ike ịmepụta ọtụtụ tubers ma e jiri ya tụnyere hydroponics. Otú ọ dị, nkà na ụzụ aeroponic bụ ihe na-achọsi ike, ike ọkụ ekwesịghị ịkwụsị ihe karịrị ọkara awa.
Ntụleghachi a dị nkenke na-egosi na mmepe nke atụmatụ afọ atọ maka mmepụta nke nduku nduku site na iji ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke obere tubers abụrụlarị eziokwu. A na-enweta mmụba nke mpịakọta na mmụba nke mmepụta site n'inweta ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke obere tubers kwa mpaghara nke nwere ọnụ ọgụgụ kacha nta nke osisi mbụ. Ala kpuchie na ihe eji eme ihe dị oke ọnụ, yabụ ịnweta naanị tubers 2-3 sitere na otu osisi bụ nhọrọ na-enweghị atụ, ọ bụ ezie na a ka na-emepụta mpịakọta nke obere tubers n'ụwa n'ụzọ dị otú a. Site na teknụzụ mkpụrụ, a na-eme atụmatụ n'ezie ọkwa mmepụta dị ka usoro ndị a: nkịtị - 100 iberibe / m2, ezi - 200 iberibe / m2; elu - 300 iberibe / m2 maka oge na-eto eto. Teknụzụ Hydroponic nwere ike imepụta obere tubers 500, aeroponic - 1000 mini-tubers kwa sq. m. nke ntinye ebe maka oge na-eto eto. Maka ntụaka: ọnụ ahịa akụrụngwa maka teknụzụ mkpụrụ na 2021 bụ 50 puku rubles. kwa square mita, maka hydroponic - 100 puku rubles, maka aeroponic - 150 puku rubles.
Isi nsogbu nke na-eto obere tubers n'ime ụlọ bụ iji nweta nchikota nke mmepe vegetative na-arụ ọrụ na nhazi tuber siri ike. Ọ ga-ekwe omume ịbawanye ike nke tuberization site na ịkwalite microclimate (okpomọkụ, iru mmiri, photoperiod), na-eme ka ihe oriri na-edozi ahụ dịkwuo mma; ojiji nke tuberization stimulants, mgbochi na vegetative ibu. N'otu oge ahụ, ịnweta obere tubers na nnukwu mpịakọta bụ ọrụ nhazi na nkà na ụzụ dị mgbagwoju anya. The nuances nke kpụ ọkụ n'ọnụ cultivation nke Obere-tubers bụ azụmahịa ozi ihe karịrị 20 afọ. Enweghị ụkpụrụ ọkachamara na ngalaba ọha, nke a bụ ihe ọmụma nke ụlọ ọrụ ọ bụla.
N'ime nkeji nke abụọ nke 2022, a ga-ebipụta akwụkwọ "Obere Potato Tubers", na-egosi na nyochaa ozi sayensị na azụmahịa dị na isiokwu a, yana na-emesi ike na ụzọ dị irè maka ịbawanye ike nke mmepụta obere tuber. Olu ozi karịrị ibe 400. Akwụkwọ a ga-adị naanị site na ndenye aha. Ziga ngwa na: s.banadysev@dokagene.ru
Tags: "Doka - Gene Teknụzụ"mmepụta nke Obere-tubers nduku
Ala na-ete onwe ya iji belata iji mmiri eme ihe n'ọrụ ugbo